Ogaden News Agency (ONA) – Seminar aqoonkororsi ah ayaa uga socda dhalinta OYSU St Paul/Min.
Seminar aqoonkororsi ah ayaa uga socda dhalinta OYSU St Paul/Min.
Posted by ONA Admin	/ November 26, 2011
Seminar iyo aqoonkorodhsi balaadhan oo siheerse ah loo soo agaasimey ayaa maalintii labaad uga socda magaalada St paul ee gobolka Minneasota maamulayaasha iyo howlwadeenada jaaliyadaha iyo ururka dhalinyarta O.Y.S.U ee dhamaanba gobolada wadanka maraykanka ee ay deginhii jaaliyadaha Ogaadeeniya.
Ujeedada seminaarkan oo ahayd kobcinta iyo kor u qaadida aqoonta howlwadeenada jabhada ee laxidhiidha xaga halganka iyo howlaha ay uhayaan ummada Ogaadeeniya. Seminaarkan oo ay soo diyaariyeen macalimiin iyo siyaasiyiin ku xeeldheer aqoon dheeraad ahna u leh halganka uu mudada dheer ku soojirey shacbiga Soomaalida Ogaadeeniya.
Waxaa seminaarka kasoo qayb galey maamulayaasha iyo guddiya Ogaadeeniya ee gobolada
Maalintii koobaad wuxuu cashirku kubilowday taariikh halgameedkii Soomaalida Ogaadeeniya oo uu soo diyaariyey Hogaanka qorsheynta iyo cilmi baadhista Jabhada mudane Maxamud Nuur. Casharkan taariikhda ah oo uu mudane Maxamud kasoo bilaabey mudadii udhexaysay horaantii qarnigii 19 aad ilaayo maanta ayey xubnihii kasoo qayb galey ay kafaa iideysteen waxyaabo badan oo laxidhiidha taariikhda Ogaadeeniya oo ayna horey u maqal ama mugdi kaga jirey casharkan kahor.
Maalintii labaan waxaa goobtii casharka lawareegay mudane Maxamedrashiid oo sharaxaad dheer kabixiyey ujeedooyin, himilooyinka, mabaadiida, iyo waajibaadka halganka ee ugga baahanyahay xubinka JWXO. Wuxuu mudane Maxamedrashiid sixeel dheer u qeexay guud ahaanba barmaamijka siyaasiga ah iyo kan arihamaha bulshada igasa oo kubooriyey howlwadeenadii kasoo qayb galey seminaarkan in ay aqoon dheeraad ah u yeeshaan halganka ay wadaan. Sidookale wuxuu Macalinku sharaxaad dheer kabixiyey sida ay xukuumada Itoobiya marar badan isugu dayday sidii ay udhexgali lahayd bulshada Ogaadeeniya iyado oo adeegsaneysa qaybo ka tirsan bulshada haseyeeshee ay ugu fashilantay arintaas adkaysiga iyo iska caabinta shacaabinta shacabka awgiis. Ugu dambeyntii wuxu mudane Maxamedrashiid kula dardaarmey xubnihii kaqayb galey seminaarka in ay aqoon dheeraad ah uyeeshaan halganka iyo howlihiisa kuna dhegenaadaan diintooda islaamka ah.
Waxaa isna qaybtii labaad bixiyey cashar lagu baranayo xeerka, tastuurka hab-maamulka Jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeeniya Mudane Axmed Rafle oo ah aqoonyahan kuxeel dheer xeerka, maamulka iyo barmaamijka siyaasiga ah ee jabhada. Mudane Axmed Rafle wuxuu faahfaafin dheeraad ah kabixiyey guud ahaanba xeerka guud iyo xeerhoosadka faracyada jabhada meelkasta oo ay joogaanba. Isaga oo mid mid usharaxay dhamaanba mowduucyada iyo qaybaha uu kakoobanyahay xeerka guud ee jabhada. Kadib xeerka wuxuu Mudane Axmed Rafle tibaaxay sharaxeyna qaab-maamulka iyo sida loogu talagaley in loodhiso guddiyada iyo sida loomaamulo bulshada.
Ugu dambeyntiina seminaarkan oo loogu talagaley in uu socdo muddo sadex maalmood ah maantana maalintii labaad maraya ujeedadiisu ahayd in loogu faaiideeyo howlwadeenada inta ay ku jiraan fasaxa looyaqaano Thanksgiving Holiday ayaa hadii eebbe idmo beri oo sabti ah lagu soo gabagabeyndoonaa magaalada St. Paul ee gobolka Minneasota.